I-Synaptics yazisa ngesenzi senzwa yeminwe kunye nokwaziwa kobuso kwinto enye | IPhone iindaba
I-Synaptics inikezela ngenkqubo yeselfowuni edibanisa inzwa yeminwe kunye nokwaziwa kobuso
Yeyiphi inkqubo ekhuselekileyo yokuqinisekisa ukuba singobani? Okona kukhuselekileyo kungangumfundi we-iris, kodwa akubonakali ngathi yeyona nto intle ukuba sijonga ukuba kuya kuhlala kufuneka ukuba iliso lifikeleleke kwaye likhanyiswe. Kwelinye icala, ukufundwa kweminwe kukhululekile, kodwa kukhuseleke kancinci. Ukuba besifuna into ekhuseleke ngakumbi, into ekufuneka siyenzile kukudibanisa iinkqubo zokuqinisekisa ezimbini, kwaye yile nto iqhubele phambili namhlanje Synaptics.
Kungekudala ngaphambi kokuba i-CES 2017 iqale ngokusesikweni, iSynaptics namhlanje ibhengeze entsha Inkqubo yezinto ezininzi zebhayometriYenzelwe ukusetyenziswa kwezithuthi, iipilisi kunye neelaptops, ezibandakanya zombini ukufundwa kweminwe kunye nokwaziwa kobuso, ukuvumela abasebenzisi ukuba bavule isixhobo ngokukhetha eyona nkqubo ilungileyo kwimeko nganye. Ukufezekisa oku, iSynaptics isebenze kunye neKeyLemon, inkampani esebenza ekubonakalweni kobuso.
I-Synaptics kunye ne-KeyLemon iqabane ukumilisela inkqubo ye-biometric yezinto ezininzi
Kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu malunga nenkqubo eboniswe yiSynaptics namhlanje kukuba, ukwandisa ukhuseleko kwesixhobo okanye nawaphi na amanyathelo athathwe kuwo, singadibanisa izinto ezimbini ukuba sinqwenela njalo.
I-injini ye-Synaptics ye-multi-factor fusion injini idibanisa amanqaku okuqinisekisa ukusuka kumanyathelo e-biometric amanyathelo okuqinisekisa. Oku kwandisa ukhuseleko ngokubanzi lwenkqubo, njengoko zombini iminwe kunye nobuso kufanele ukuba zihlangabezane nobuncinci beemfuno zomqobo ngaphambi kokuqinisekiswa. Ukongeza, ukudityaniswa kweinjini kuphucula ukusebenziseka, njengoko umqobo wokuqinisekisa osezantsi usakhokelela kukhuseleko oluphezulu.
Elinye inqaku elinomdla malunga nokuyilwa kweSynaptics kukuba yenziwe ubungqina bobungqina, kuba isebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela ukwahlula phakathi komnwe wokwenene kunye nobuxoki. Inkqubo yokwamkelwa kobuso ikwajonga ukuqaqamba kwamehlo kunye nentshukumo yentloko ukuthintela ukonakala okanye ukusetyenziswa komfanekiso omileyo.
Ngokwam, ndibuze, ndingathanda ukuba ii-Synaptics zisebenzise iris endaweni yokuqaphela ubuso, kodwa usekela mongameli wenkampani wentengiso, u-Anthony Gioeli uthi bazakubandakanya "imilinganiselo yebhayometri kunye nezinto zokhuselo ezongezelelweyo" kwilixa elizayo. Ngaba siza kubona into efanayo kwi-iPhone 8?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Synaptics inikezela ngenkqubo yeselfowuni edibanisa inzwa yeminwe kunye nokwaziwa kobuso
Ukucula nje kuza kwi-iOS ukuze sikwazi ukusebenzisa i-iPhone njengemakrofoni kunye nekhamera
I-Qardio iveza iQardioCore, ibhanti yokujonga iintliziyo zethu ezihambelana ne-iOS